japan | ZAYYA
No! Jean Paul Satre – No!
(၁) The Other is Hell. လို့ ယန်းပေါလ်ဆက်ကြီး ပြောခဲ့တယ်။ အဲ့စကား ကြားပြီးကတည်းက ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်ချိန် တိုင်းမှာ တိမ်တောင်တွေဟာ နတ်ဘုရားတွေလို ပြိုပြိုကျ လာတော့တာပဲ။ နေ့အခါမှာ တိမ်တောင်တွေလို၊ ညအခါမှာ ကြယ်ရောင်တွေလို။
(၂) မနက်အစောကြီး ထဖို့ကလည်း အပျင်းထူတယ်။ ကျနော့အဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်စီးတဲ့ ဖိနပ်တောင် ထိပ်တွေ ပြောင်အောင် မတိုက်တတ်ဘူး မဟုတ်လား။ ငယ်ငယ်က အဖေ ဆူတယ်။ မိုးတွင်းအချိန် တစ်ခု။ မိုးကလည်း ကျောင်းဆင်းချိန်ကျမှ အငြိုးနဲ့။ သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာတယ်။ ကျောင်းစိမ်းအင်္ကျီ၊ ပုဆိုး၊ အကုန်စိုရွှဲတယ်။ ရေလျံလို့ ဗွက်ပေါက်နေတဲ့ လမ်းမှာ လျောက်တော့ ကျောင်းစိမ်း ပုဆိုးကို မ-မဘဲ လျောက်တယ်။ ဘာဖြစ်လဲ ပုဆိုးက စိုနေပြီးသားပဲ။ မ-မလည်း စို၊ မ-လည်း စိုမှာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဖေက ကျနော့ကို ဆူတယ်။
Filed under mood Tagged with japan, Jean Paul Satre, mood
ငါးတစ်ကောင် ကားခနဲ ခုန်အဆင်း
“ဩ- ပြန်လာပြီလား” တဲ့။
ဆူဖီဆရာ ရူမီရဲ့ ဒီကဗျာလေးက ဇင် ဟိုက္ကု ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်နဲ့ ဆင်တူတယ်။ မူလဘူတ ဌာနေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရောက်ရှိတဲ့ သူ အတွက် – နေထိုင်တဲ့ ခဏတွေ ဟာ မေးခွန်း မရှိ၊ အဖြေ မလို၊ ဟိုသည် ဖွေရှာ နေတဲ့ အဖြစ် အားလုံး ရပ်တန့်သွား တာ တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခဏတာ ကိုသာ မြင်သူ အတွက် အတိတ် ဟာ စွဲညိ မနေဘူး။ တစ်ခဏတာ ကို မိမိ ရရ ရှုမှတ် နိုင်သူ အတွက် အနာဂတ် လည်း မလိုအပ်ဘူး။ အတိတ်၊ အနာဂတ် ရှိ မနေသူ အတွက် ဘယ် မေးခွန်းမှ မပေါ်ပေါက် ဘူး။ ဒါကြောင့် အဲ့လူဟာ ဘယ် အဖြေကိုမှ ရှာ မနေတော့ဘူး။ Read more of this post
Filed under Opinion, Photo Essay Tagged with haikku, japan, rumi, sufi
ဟိန္ဒူဘာသာရေးတွင် “ဘုရားသခင်နှင့် ၎င်း၏နာမတော်သည် ဧက၊ တစ်သဘောတည်း၊ တစ်ခုတည်း” ဟု ဆိုသည်။ တာအိုဘာသာတွင်မူ “သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်နိုင်သော အမည်နာမသည် အမည်နာမ စစ်စစ် မဟုတ်” ဟု ဆိုပြန်သည်။ အဘယ်ဟာ မှန်ပါသနည်း။
ဒဏ္ဍာရီ အရ ဖူရှီ ( Fu Shi ) သည် တရုတ် မဟာအင်ပါယာ ဘုရင်ကြီး (ဝါ) ဧကရာဇ် သုံးပါးတွင် ပထမဆုံး သမိုင်းဝင် ဧကရာဇ် ဖြစ်သည်။ ( ကျနော့စိတ်ထင် – ကျနော်တို့ မြန်မာအများ ကြားသိဖူးကြသော မဟာသမ္မတမင်းတို့က ၎င်းထက် ပိုစောမည်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိ။ ) ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်သုံးထောင် အစောပိုင်းက တရုတ်ပြည်လုံးကို စိုးမိုး အုပ်စိုးခဲ့သူ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဖူရှီသည် တရုတ်ရှေးဟောင်းကျမ်းတစ်ဆူ ဖြစ်သော I-Ching ယီကျင်း ( သင်္ခါရကျမ်း/ပြောင်းလဲခြင်း သဘောတရား ကျမ်း ) ပါ တြိမူဟ ရှစ်ခုတို့ကို ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ အချို့က ယင်းတို့သည် တရုတ်တို့၏ အရုပ်ဆန်သော လက်ရေးစကားလုံးတို့၏ အခြေခံလည်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။
လက်ရှိ တရုတ်တို့၏ ပင်မ ဒဿန ရေစီးကြောင်း နှစ်ခုမှာ တာအိုဝါဒနှင့် ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ တို့ ဖြစ်ပြီး ၎င်းဝါဒတို့သည် ဖူရှီ ၏ အစဉ်အလာမှ ဆင်းသက်လာကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု အယူရှိကြသည်။ ခရစ်တော် မပေါ်မီ ခြောက်ရာစုမှ စတင်၍ ၎င်းဝါဒနှစ်ဆူ ကွဲပြားသွားခဲ့ပြီး တာအိုဝါဒ၏ ဖခင် – လောက်ဇူ ( BC 604-531 ) ၊ ကွန်ဖြူးရှပ် ဝါဒ – ဖခင် ကွန်ဖြူးရှပ် ( BC 551-479 ) ဟူ၍ အမှတ်အသားရှိသည်။
တရုတ်တို့၏ ဘာသာရေး အတွင်းမှ တတိယ ရေစီးကြောင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပြီး အစဉ်အလာ အိန္ဒိယမှ ဆင်းသက်သည်။ အိန္ဒိယ ဗုဒ္ဓဘာသာ မထေရ်များ A.D ပထမ ရာစုတွင် တရုတ်ပြည်သို့ စတင်ဝင်ရောက် သာသနာပြုသည်။ ယင်း အိန္ဒိယ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော ပြောစကားများ အရ တရုတ်လူမျိုးတို့သည် အစောပိုင်း ကာလ ကတည်းက အိန္ဒိယသို့ ဘုရားဖူးအဖြစ်၊ ( သို့မဟုတ် ) ကုန်သည်အဖြစ် ရောက်ရှိလာကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုကို တရုတ်ပြည်သို့ သယ်ဆောင်သွားကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုကာလမှစ၍ တရုတ်ပြည်တွင် ပင်မ ဘာသာရေး ကြီး သုံးခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခေတ်နှင့် အညီ ဆီလျော်အောင် ပေါင်းစပ်၍ ကျင့်သုံး လက်ခံကြသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်ကြရသည်။
စင်စစ် အမျိုးအမည် မတူညီသော ဘာသာတို့ကို ပေါင်းစပ်ရန်မှာ မလွယ်ကူပေ။ ဘာသာတစ်ခုမှ ကွဲပြားသွားဖို့ရာသာ လွယ်ကူသည်။ သို့သော် တရုတ်တို့ ၏ ဘာသာကြီး သုံးခု ဖြစ်သော တာအိုဝါဒ၊ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓဝါဒတို့သည် တခုနှင့် တစ်ခု ကူးလူးယှက်နွယ်နေကြသည်။ အနီးစပ်ဆုံးမှာ တာအိုဝါဒနှင့် ကွန်ဖြူးရှပ် ဝါဒတို့ ဖြစ်ပြီး Read more of this post
Filed under wisdom Tagged with ancient, behaviour, buddhism, china, Christian, confucius, Fu Shi, Hinduism, India, japan, LaoTzu, life, nobel, religion, Shitoist, Tao, truth, way
ဗမာ့ အောင်ဆန်း ( ၃ )
ဗမာ့အောင်ဆန်း ( ၂ ) မှ အဆက် –
Filed under AungSan Tagged with Army, aung san, Bol Latyar, Bol Moe Kyo, Bol Zayya, Burma, empire, feature, independence, japan, khin kyi, soldier
ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ် ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ ဤဆောင်းပါးကို ဦးပုကလေး ရေးသည်။ ဆောင်းပါး ဟုပင် ဆိုရသော်လည်း ပင်လုံ ညီလာခံနှင့် တကွ ဗိုလ်ချုပ် မကွယ်လွန်မီ လပိုင်း အချိန်ပိုင်းအတွင်း တောင်တန်း မြေပြန့် တစ်ခွင် လှည့်လည် ကြိုးပမ်းခဲ့ရမှုများ နှင့် မြို့တော် ခန်းမအရှေ့တွင် နောက်ဆုံး ဟောပြောခဲ့သော တိုင်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး မိန့်ခွန်းများကို သမိုင်း မှတ်တမ်းသဖွယ် တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ ၎င်းအပြင် ဤဆောင်းပါး မှတ်တမ်း အတွင်းပါ ဗိုလ်ချုပ်၏ ပြောစကား အသံဖိုင်များကို လိုလားခဲ့ပါလျင် ဤလင့်ခ်မှ သွားရောက် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ကျနော့တွင် အပြည့်အစုံတော့ မရှိသေးပါ။ လိုအပ်နေပါလိမ့်မည်။
ကရင်နီ နယ်သူနယ်သား တို့သည် ဂျပန်ကို အပြင်းအထန် တော်လှန် ခဲ့ရပါလျက် အင်္ဂလိပ်တို့ ပြန်ရောက် လာသောအခါ စားရေးရိက္ခာ လုံလောက် အောင် မရ အငတ်ငတ် အပြတ်ပြတ် ဖြစ်နေကြရခြင်း၊ ပြောသလို မဟုတ် အလုပ်ကျတော့ တစ်မျိုး ဖြစ်နေခြင်း များကြောင့် အင်္ဂလိပ် တို့ အပေါ်၌ မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြ၏။ သခင်နု တို့ လူသိုက် ဆိုက်ရောက်သွား ကြသောအခါ ထိုသို့ စိတ် သဘောထားများ ဖြစ်ပေါ် နေကြောင်း သိရှိကြသဖြင့် ကရင်နီ သမ၀ါယမ အသင်းရုံ တွင် လူထု အစည်းအဝေး ကျင်းပ ဟောပြောကြ၏။
သခင်နုက တောင်တန်း နယ်များ အပေါ်၌ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးက မည်ကဲ့သို့ သဘောထားပုံ၊ ဗမာပြည် နှင့် တောင်တန်းနယ်များ ပူးပေါင်းပါက မည်ကဲ့သို့ အကျိုးများ မည့် ပုံများ ကို ရှင်းပြပြီး လျှင် “နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကျော် မျှ အင်္ဂလိပ်က ခင်ဗျားတို့ အပေါ်မှာ အုပ်ချုပ် လာတာ ဘယ်လောက် စေတနာ ကောင်းတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက် အကျိုး ခံစားခွင့် ရကြတယ်” ဆိုတာကို မော်ချီ မိုင်းကြီးက သက်သေခံ လျက် ရှိနေပါတယ်။ ဒီ မော်ချီ မိုင်းကြီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သတ္တုတွင်း အားလုံးနှင့် ယှဉ်ကြည့်လျှင် (၃၅) ရာခိုင်နှုန်းမျှ ထွက်ပါတယ်။ ဗြိတိသျှ အင်ပါယာ အတွင်းရှိ သတ္တုတွင်း အားလုံးနှင့် ယှဉ်ကြည့်လျှင် (၈၅) ရာခိုင်နှုန်း မျှ ထွက်တယ်။ ထိုမျှလောက် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ထွက်ပါလျက် ခင်ဗျားတို့ နယ်သူ နယ်သား တွေ မှာတော့ ထမင်း ၀အောင် မစားရဘူး။ ငတ် နေကြရတယ်။ ယခု အတိုင်းသာ သွားနေလျှင် ခင်ဗျားတို့ အခြေဟာ ပိုဆိုးဖို့ သာ ရှိတယ်” စသဖြင့် နယ်ချဲ့သမား ဓနရှင် ၀ါဒ၏ ဆိုးရွားပုံ များကိုလည်း ပြတ်ပြတ် သားသားကြီး ဟော၏။
မန်းဘခိုင် ကလည်း “မိမိတို့ မြေညီ ကရင်များဟာ ဗမာများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးကို အရယူမည့် အကြောင်း၊ တောင်တန်းနယ်များ၊ ဗမာပြည်နှင့် ပူးပေါင်းဖို့ အရေးကြီး လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း” များကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းကြီး ဟော၏။ ကရင်နီ အမျိုးသား တို့သည်လည်း မကြားစဖူး ထူးခြားသည့် တရားများကို ကြားရသည့် အတွက် အထူး နှစ်သက် အားရကြ၏။ ချီးကျူးကြ၏။ အထူး အားဖြင့် ပဒေါင်း တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ထိုင်တဟန် (ယခု မိုးဗြဲနယ် စော်ဘွား တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော် အမတ်) ဘောလခဲ – ကြက်ဘိုးကြီး နှင့် ကန္တာရ၀တီ နယ်ရှင်များ၊ စောမြလေး စသော ကရင်နီနယ် ခေါင်းဆောင်များ နှင့် သခင်နုတို့ နိုင်ငံရေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ဆွေးနွေးကြရ၏။
ကရင်နီနယ်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်း ဘေးကို ကယ်ဆယ်ရန် ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်က ဆန်အိတ် (၅၀၀) နှင့် ဆားတစ်တွဲ လှူဒါန်းမည် ကတိပေး လိုက်သောအခါ အထူး ၀မ်းသာအားရ ဖြစ်ကြ၏။ ကတိ ပြုခဲ့သည့် အတိုင်းလည်း ဆန်အိတ် (၅၀၀) နှင့် ဆားများကို လှူဒါန်းခဲ့၏။ သခင်နုတို့သည် လွယ်ကော်မှ အပြန် ဘန်းရင်စော်ဘွား ဟော်တွင် လူထု တရားပွဲ ဟောပြီးနောက် ပင်လုံ ညီလာခံသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာသွားကြ၏။
သခင်နုတို့နှင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ရသော ကရင်နီ ခေါင်းဆောင်များ လည်း မိမိတို့အား ဖိတ်ကြား သွားသည့် အတိုင်း ရန်ကုန်သို့ ဆင်းလာကြ သဖြင့် ဖဆပလ လူကြီးများက မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပ ဆွေးနွေး ကြသည့် အပြင် ဗိုလ်ချုပ် ကိုယ်တိုင်လည်း အထူး အရေး ယူလျက် ဗမာပြည်နှင့် ကရင်နီနယ် ပူးပေါင်းရေး သဘောတရားများ ကို ရှင်းလင်း ပြောပြရာ အထူး ကျေနပ်ကြ၏။
(၁၉၄၆) ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းက ဗိုလ်ချုပ် လွယ်ကော်သို့ ရောက်ရှိပြီး အဆိုပါ ကရင်နီ ခေါင်းဆောင်များ နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ရပြန်သည့် အတွက် ဗိုလ်ချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ကြရန် သဘောတူ ခဲ့ကြ၏။ ထို့ကြောင့် လည်း (၁၉၄၇) ခု၊ ဧပြီလ အတွင်းက မေမြို့တွင် စုံစမ်း စစ်မေးသော တောင်တန်းနယ် စုံစမ်းရေး ကော်မတီ ရှေ့မှောက် တွင် ကရင်နီ နယ် နှင့် မိုးဗြဲနယ် ခေါင်းဆောင်များ သည် ကရင်နီနယ် သည် ဗမာ နိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စု သို့ ပါဝင် လျက် တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်သို့ ကိုယ်စားလှယ် စေလွှတ်ရန် သဘောတူကြောင်း အစစ်ခံ ခဲ့ကြသည်။
သွေးခွဲစနစ် ထပ်၍ ညစ်
ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ကျင်းပသည့် ဗမာပြည် တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကြီး နီးကပ် လာသောအခါ နယ်ချဲ့သမား တို့၏ သွေးခွဲမှု တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖြစ်ပေါ် လာပုံကား ကရင်နီနယ်သည် အင်ဒီပင်းဒင်းနယ် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့ ထံမှ ငွေချေးပြီး ပြန်လည် ထူထောင် နိုင်သည်။ ဗမာပြည် အဆင့်အတန်း ထက် မြင့်သည်။ ကိုယ့်ကောင်စီ နှင့် ကိုယ် လုပ်နိုင်သည်။ စသည်ဖြင့် ခြေထိုးမှုများ ၀င်ရှုပ် လာသည့် အတွက် တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော် သို့တက်ရန် ရန်ကုန်သို့ လာကြသော ဦးဘီနှင့် စောထိမ် တို့သည် ခြေထိုးမှု တိမ်သလာ အောက်သို့ ၀င်ရောက် ဖုံးကွယ် သွားလေတော့၏။
Filed under AungSan Tagged with Air, Air Force, America, Army, aung san, bogyoke, Burma, Communist, Dominium, Fascism, government, japan, London, Mann Ba Khaing, money, myanmar, Navy, policy, politics, Shan State, Socialist, Thailand, union